Qeybta:General1 min akhris
Machadka McKnight wuxuu taageeraa Wadahadallada Madaniga ah ee Furan
Waxaan sugaynaa dhowr toddobaad oo kaliya doorashada Nofeembar 2. Codbixinta hore ayaa bilaabatay Sebtember, cod -bixiyeyaal badan ayaa durba codkooda dhiibtay. Waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay in dhammaan xubnaha bulshada ay marin u helaan hannaanka dimuqraadiyadda.
Sida aasaas gaar ah, McKnight ma taageerto mana ka soo horjeedo musharraxiin gaar ah ama sharci kasta oo la sugayo ama su'aalaha hindisaha cod -bixinta. Magaalada Minneapolis, iyo meelo kale, ma aynaan taageerin mana diidin wax gaar ah soo jeedimaha dib -u -habaynta booliska—Ma aha mowqifka deeq -bixiyuhu taas oo sabab noo noqon karta inaan cusboonaysiino ama joojinno maalgelinta iyaga. Waxaan maalgelineynaa wada -hawlgalayaasha aan macaash doonka ahayn oo naga caawiya inaan la kulanno yoolalka barnaamijyadeenna kala duwan ee farshaxanka, cilmi -baarista neerfaha, cilmi -baarista dalagga caalamiga ah, hoggaaminta cimilada ee Midwest, iyo abuuridda bulshooyin badan oo loo siman yahay Minnesota. Waxaan samaynaa go'aanno maaliyadeed oo ku saleysan haddii ay soo bandhigaan fikrado qasab ah oo hormarinaya himilooyinkaas iyo haddii ay la kulmaan dhammaan tilmaamaha maaliyadeed ee aasaasiga ah ayna la jaanqaadaan qiimayaashayada, oo aan ka dhigno sida ugu macquulsan dhammaan isgaarsiintayada.
In kasta oo aanan ka qaadan karin mowqif gaar ah tallaabooyinka cod -bixinta, haddana waxaan taageernaa bulshooyinkeenna inay yeeshaan wada -hadallo madani ah oo adag oo cad oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa arrimaha muhiimka ah sida badbaadada dadweynaha. Tani waxay aad muhiim ugu tahay mustaqbalka Minneapolis, waxaanan u baahanahay inaan horumarino muruqa bulshada si xushmad leh aan u keeno nafteena ugu fiican iyo fikradahayada ugu fiican si aan u horumarinno xalal feker leh oo saamaynta ugu wanaagsan u leh bulshooyinkeena.
Iyadoo aan loo eegin wax natiijo doorasho ah 2 -da Novembernd iyo wixii ka dambeeya, McKnight wuxuu sii wadi doonaa hadafkeenna si aan u abuurno mustaqbal aad u caddaalad badan, hal abuur leh, iyo mustaqbal badan oo dadka iyo meeraha ay ku barwaaqoobaan. Waxaan sidoo kale sii wadi doonnaa inaan u doodno dadka aragtiyaha kala duwan leh si loo abuuro xalal dan u ah dhammaan.
Qodobbada ugu muhiimsan ee laga bilaabo 2021